निर्मला बलात्कार-हत्या काण्ड : थप चारको पनि डीएनए रिपोर्ट नेगेटिभ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
निर्मला बलात्कार-हत्या काण्ड : थप चारको पनि डीएनए रिपोर्ट नेगेटिभ
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार November 16, 2018
काठमाडौं । छोरीले न्याय पाउनेमा झिनो आशा लिइरहेका बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुबा–आमालाई पछिल्लो डीएनए परीक्षणको नतिजाले थप निरास बनाएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानका क्रममा डीएनए परीक्षणका लागि पठाइएका थप चार जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले पठाएको रिपोर्टमा चारै जनाको डीएनए रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा शंकाको घेरामा परेका थप ४ जनाको डीएनए पनि नमिलेको कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णराज ओझाले बताए ।
प्रहरीले शंकाको घेरामा परेका चार जनाको कात्तिक १३ गते डीएनए नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाएको थियो । प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट आएको डीएनए रिपोर्ट निर्मलाको स्वाबमा रहेको डीएनएसँग म्याच नभएको उनले अनुसन्धानका क्रममा थप अरु कसैमाथि शंकाको अवस्था आए फेरि पनि डीएनए परीक्षण गर्न सकिने बताए ।
यसअघि, प्रहरीले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा आयुष विष्टको डीएनए परीक्षण गर्दा मेल खाएको थिएन भने दिलिपसिंह विष्ट र चक्रदेव बडुको समेत डीएनए मेल खाएको थिएन ।
अहिले निर्मलाको हत्या भएको साढे तीन महिना पुगिसक्दा समेत सुरक्षाकर्मीले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । पटक–पटकको अनुसन्धानले पनि घटनाको निचोडमा नपुर्‍याएपछि निर्मलाका बुबा–आमा छोरीको न्यायका लागि धर्ना बसेका छन् । अहिले उनीहरु नै चिसोका कारण बिरामी परेका छन् ।
भट्टराइद्वारा सभामुखलाई पुरानै प्रतिवेदन पेश
पुस २९ ।काठमाडौ, संवैधानिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान लेखनका विवादसहितको पुरानै प्रतिवेदन […]
लोकमानविरुद्धको महाअभियोग आज संसदमा, अब के होला ?
काठमाडौं ७ कात्तिक । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावले आज […]
राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा तीन जनालाई सिफारिस
चैत ४ ।काठमाडौ, नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरका लागि युवराज भुषाल, चिरञ्जीवी नेपाल र गोपालप्रसाद काफ्लेको […]
मनाङ मर्स्याङ्दीले जित्यो दुहबी गोल्डकपको उपाधि
काठमाडौं । मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले मनमोहन मेमोरियल दुहबी गोल्डकपको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा […]
कसरी पाइन्छ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण ? कस्तो बन्दै छ कार्यविधि
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि दिने भनेको ऋण यसै वर्षबाट पाउन सकिने भएको छ । शैक्षिक […]
‘मधेसमा तीन प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ’: उपप्रधानमन्त्री गच्छदार
पुस २६ । काठमाडौँ, उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले […]